Hirshabeelle Oo Codsatay In Lagu Garab Siiyo Dagaalka Ka Dhan Ah Al Shabaab | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Hirshabeelle Oo Codsatay In Lagu Garab Siiyo Dagaalka Ka Dhan Ah Al Shabaab
Axad, Marso 11, 2018(HNN) Maamulka Hirshabellle ayaa ku baaqay in lagu gacan siiyo dagaalka ka dhan ah kooxda Al shabaab kuwaasoo xiligan ku sugan deegano ka tirsan gobollada Hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo maamulka uu ka arimiyo.
Sheekh Cismaan Barre Maxamed guddoomiyaha baarlamanka Hirshabeelle ayaa ka codsaday dowladda federaalka inay garab ku siiso sidii kooxda Al shabaab looga saari lahaa gobolka shabeellaha dhexe oo xiligan fariisimo cusub ay ka sameysteen.
“ waxan ka codsaneyna dowladda federaalka Soomaaliya inay garab nagu siiyaan xoreynta deegannada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe oo nabad-diidka ay saldhigyo cusub ka dhigteen ayuu yiri Sheekh Cismaan Barre.
Guddoomiyaha baarlamanka Hirshabeelle ayaa sheegay in xiligan ay adag tahay in xildhibannada iyo madaxda maamulka ay ku safran wadada isku xirta Muqdisho iyo Jowhar islamarkaana ay sabab u tahay in Al shabaab ay saldhigyo ka sameysteen deegannada u dhexeya labada magaalo.
“degmada Balcad oo muddo aan galin gacanta cadowga dhawan waxaa la wareegay kooxda Al shabaab muddo kooban ayay heysteen, annaga ka maamul ahaan wax kama qaban karo maxaayeelay, dagaalyaano kala yimid gobollada dalka ayaa soo galay deegannada Hirshabeelle waa in garab na lagu siiyaa xoreynta deegannada gacanta cadowga ku jira ayuu sii raaciyay guddoomiyaha baarlamanka Hirshabeelle.
Guddoomiyaha baarlamanka Hirshabeelle ayaa hadalkan ka sheegay furitaankii kalfadhiga 3-aad ee baarlamanka Soomaaliya oo uu ka qeyb galay.
Kooxda Al shabaab ayaa culeys badan saartay deegannada Hirshabeelle gaar ahaan inta u dhexeya Balcad iyo Jowhar taasoo keentay in madaxda Hirshabeelle ay ku safran diyaarad marka ay u socdan magaalada Muqdisho xili markii hore ay mari jireen wadada laamiga.